Yakka Raawwatame Kan Qoratu Eenyu?
Waxabajjii 04, 2010
Namoota Oromiyaa keessatti himataman irratti abbootiin seeraa murtii kennuu waan sodaataniif jecha, gara mana murtii Federaalaatti dabarsu jedhu, presidaantii mana murtii walii gala Oromiyaa kan turan obbo Tashaalee Aberraa.
Itiyoophiyaa keessatti yakka raawwatame qoratee mana murtitti dhiyessu kan qabu polisii ta’ee otuu jiruu abban seeraa fi manni-murtis itti dabalamanii yakka qorachuun dhiyessu” ka jedhan, prezidaantiin Mana-murtii Walii-galaa kan Oromiyaa duraani, Obbo Tashalee Abarraa Kun deemsa murtii kennu keessatti loogii uuma” jechuun qeequ.
Namoota Oromiyaa keessatti yakka rawwatan jedhaman dhimma isaanii mana murtii Oromiyaa keessatti ilaaluun otuu danda’amuu gara mana murtii Federaalaatti dabarsu” jechuudhaan, Mootummaan Itiyoophiyaa abboota-murtii Oromiyaa irraa waan amantaa hin qabneef ka kana godhu akka ta’etti dubbatan.
Akka seera jiruutti, Manni murtii Oromiyaa dhimma Federaalaa ilaaluuf akka aangoo qabu eeranii, Mana murtii Federaalaa keessaa abboota seeraa Oromoo baasanii fixan. Walumaa-galatti deemsi mana-murtii keessa jiru seera hojii irra oolchu otoo hin taane kanneen aangoo qabatanii jiraniif faayidaa siyaasaa eegsisuu dha. jedhu, Obbo Tashalee Abarraa.
Gaaffii fi deebii obbo Tashaalee waliin geggeeffame kutaa 1ffaa
Gaaffii fi deebii obbo Tashaalee waliin geggeeffame kutaa 2ffaa